Famoahana sy fikarohana amin'ny fotoana tena | Martech Zone
Alakamisy 4 martsa 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Amin'ny fotoana katroka… Lasa singa tena lehibe io. Webtrends dia namoaka fikarohana amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny fanairana. PubSubhubbub mipoitra ho an'ny bilaogy hanosika ny fahana fa tsy hamerina azy ireo. Mihena ny fotoana fijerin'ny karoka… manantena ny valin'ny fanontaniana napetraka tamin'ny minitra vitsy lasa izay ny olona.
Ho an'ny mpanonta, ny fanamby dia ny fihetsikao rehefa misy ny vaovao ka manararaotra izany avy hatrany. Raha ao amin'ny indostrian'ny finday ianao ary mitranga ny vaovao dia mila mamoaka haingana araka izay tratra ianao. Tsy ny laza fotsiny no mitondra fiara, fa ny fahaizanao mamaly ihany koa.
Andro vitsy lasa izay, namoaka WordPress Plugin ho an'ny ChaCha aho. Ny plugin dia fitambarana fitsapana singa sasany ao amin'ny tambajotram-panontaniana goavam-be ChaCha - misy amin'ny alàlan'ny API, feed topical, ary feed manokana. Ny plugin dia manana widget sidebar vitsivitsy - iray izay mamela ny fametrahana fanontaniana amin'ny fotoana tena izy ary mamaly valiny…. milay be.
Ho an'ny tompona bilaogy, nasiako fantsom-pifandraisana ChaCha Trends izay manome ny bilaogera topimaso momba ny angona fironana momba ny ChaCha, Twitter ary Google! Amin'ny fandinihana ny fampahalalana malaza dia azonao atao ny mitrandraka am-pifamoivoizana lohahevitra izay angatahan'ny olona, ​​tadiaviny, na iadian-kevitrao.
Azafady mba ampahafantaro ahy ny hevitrao! Mandehana fotsiny amin'ny lahatahiry plugin anao, Add New, ary tadiavo ny ChaCha. Kitiho ny install ary hametraka plugin izy io. Raha hampiasa ireo widgets sidebar dia misorata anarana ho an'ny fampidirana fidirana avy amin'ny ChaCha dia hiarina tsy ho ela ianao! Raha te-hihazakazaka ny dashboard fotsiny ianao, manorata zavatra fotsiny ao API Sehatra manan-danja.
Somary misy tabataba kely avy amin'ny kolontsaina pop manerana ny loharano rehetra, fa hahita vatosoa ianao indraindray mba hanam-bola. Ny fampiasana ny fotoana tena izy ao anaty atiny sy ny famoahana haingana ny atiny dia afaka manome fifamoivoizana tsy ampoizina kely amin'ny bilaoginao!
Disclosure: ChaCha dia mpanjifa.